Microsoft Word chishandiso chakakosha kugadzira, kugadzirisa uye kugovera mafaera ako nevamwe asi mabasa akati wandei anogona kutishungurudza kana tichiedza kushanda pabhuku. Kubvisa peji risina chinhu kunoitika kuve rimwe rebasa. Heano mhinduro nyore kwayo!
Kubvisa peji muIzwi gwaro
Microsoft Word haina kufanana neMicrosoft PowerPoint, kwaunokwanisa kubvisa masiraidhi nekungosarudza uye kuidzima. MuShoko, iwe unofanirwa kubvisa zviri mukati (zvinyorwa uye magirafu) kubvisa mapeji. Kuita kuti ndima dzisina chinhu dzive nyore kuona, chinja kuratidza manotsi endima: Press Ctrl + Shift + 8. Wadaro, sarudza zvirimo zveiyo peji uye hit Dele.
Saizvozvo, iwe unogona kusarudza uye kudzima peji rimwe chete rezvinhu chero mune gwaro rako. Kune izvi, maitiro acho akatosiyana.
Heano maitiro ayo!
Isa chikwangwani chako chero kupi zvako mune peji rezvinyorwa raungada kudzima uye chinja kune iyo 'Imba' tab.
PaTebhu Yekumba, tsvaga iyo 'Tsvaga' inowanikwa mukona yekumusoro yepamusoro kurudyi uye rova ​​museve wekudonsa pasi. Kubva pane runyorwa rwesarudzo dzakaratidzwa, sarudza 'Enda Ku'.
Zvino, mhanya peji wobva wadzvanya Go To.
Icho chiitiko kana chakasimbiswa chinosarudza zvirimo peji.
Mushure meizvozvo, ingosarudza 'Vhara', uye wobva wadzvanya 'Delete'.
Dzima peji isina chinhu muShoko
Mugwaro reShoko rakavhurwa, sarudza mucherechedzo weParafu kubva kuboka reParafu rinoonekwa pasi pe'Imba 'tab.
Zvino, kudzima peji risina chinhu pakupera kwegwaro, sarudza mamakisi endima (¶) kumagumo kwegwaro racho, wobva wabaya 'Delete' bhatani. Paunenge wapedza, tinya zvakare paParafu chiratidzo kuti udzime.
Kana iyo nzira iri pamusoro apa ikatadza kushanda, vhura iro Shoko faira uye dzvanya pane iro 'Faira' menyu.
Gare gare, enda kuPrinta sarudzo uye sarudza Dhinda preview kubva pane runyorwa rwezvisarudzo zvinoratidzwa.
Pakupedzisira, chengeta Pwanya peji rimwe kudzima imwe yacho isina rimwe peji.
Nzira yekudzorera sei zvinyorwa zveShoko zvisina kuchengetwa
Gadzirisa: Haikwanise kubvisa printer mukati Windows 10
Zvose zvaunogona kuita ne Voice Voice pane iPhone ne iPad
Filed Under: hvernig virkar izwi